Faran’ny taona : Hampiantrano ny « Réveillon de l’Année » ny CCI Ivato -
AccueilVaovao SamihafaFaran’ny taona : Hampiantrano ny « Réveillon de l’Année » ny CCI Ivato
30/12/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Toerana tsy dia nahazatra tamin’ny lanonana faran’ny taona. Hampiantrano ny “Réveillon de l’année 2017” ny CCI Ivato ny 31 desambra izao. Hetsika anisan’ny goavana raha ny eto an-drenivohitra ary ahitana ireo mpanakanto tena ankafizin’ny olona, indrindra amin’ny mozika mafana sy ny fampandihizana ahitana an’i Stéphanie, Arnaah, Rak Roots, Ndondolah sy Lucia. Vahiny nasaina kosa ny dika mitovy amin’i Tahiry.
Anisan’ny hanasongadina ity takariva ity ny fiarahana eo amin’ny andriambavilanitra roa samy manana ny maha-izy azy, dia Stéphanie sy Arnaah. Izy roa ireto izay samy namoaka hira nanana ny lazany tamin’ity taona ity toy ny « Zah aminao », « Mila fitiavana »… ho an’i Stéphanie ary ny « Samby tia », « Ngôma ngôma », « Magneva »… ho an’i Arnaah. Anisan’ny hira nanamarika ny taona 2017 ary mbola hanamarika ireo fetin’ny faran’ny taona ihany koa ny « Tania », « Efiko parsi »… an’i Rak Roots.
Etsy ankilan’izay dia mandritra io fotoana io no hamerenan’I Ndondolah sy Lucia ny “Miara mamindra” izay efa nasehon’izy ireo tamin’ny rakitsary ny dihy miaraka aminy ary hiarahana amin’ireo rehetra ho tonga eny. Hisongadina ihany koa anefa ny famerenana ireo hiran’i Ndondolah sy Tahiry toy ny « La mozika », « Konfiansy », « zama »… izay hiarahana kosa amin’i Miora.
Ity no lanonana goavana raisin’ny efitrano « Emeraude » taorian’ny hetsika ny Frankôfônia, izay hahazaka olona hatrany amin’ny 1000 any ho any. Tsy afa-misaraka amin’ny hetsika toy izao ny sakafo ka hisy ny hanim-pitoloha entiny hitsenana ny taona vaovao miaraka amin’ny Espace Fitsikina.
Diso tanteraka ny fandraisan’ny vahoaka malagasy ny fihetsika nasehon’ny Mapar teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai nandritra ny fitokonana notarihin’ireo depiote miisa 73. Maro tokoa mantsy no nihevitra fa dia ny hanongam-panjakana mihitsy no tanjon’iny fitokonana ...Tohiny